Sele sinomceli mngeni kunye nembasa kwi-Apple Watch yoSuku looMama | IPhone iindaba
Sele sinomceli mngeni kunye nembasa kwi-Apple Watch yoSuku looMama
Nangona uSuku lukaMama eSpain lwalusezintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, e-United States of America, apho basebenza khona neenkqubo zokusebenza zenkampani yeapile, ibhiyozelwa ngeCawe ezayo, nge-14 kaMeyi. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iApple nayo ityikitye ukubhiyozela Usuku Lomhlaba ngomnye umsitho kwiApple Watch endikuphosileyo kabuhlungu.
Inkampani yaseCupertino ijoyina ngokulula ezi ntlobo zamanyathelo akhuthaza abasebenzisi beApple Watch ukuba baphucule impilo kunye nokusebenza komzimba, kwaye asinakubasola ngenyaniso. Ngeli thuba, imbasa eza kufunyanwa ukuze kugqitywe umceli mngeni luhlobo lwe-tulip okanye i-rose, intyatyambo yoSuku looMama, i-cliché.
Ngeli thuba Kuya kufuneka sihambe i-1,6 km usebenzisa isicelo soQeqesho (Eli nani lokuzilolonga lingahluka kuhlobo lweSpanish, kuba e-United States of America kuye kwafunyanwa ukuba iyakuba yimayile enye, elingana ne-1,6 km). Umzekelo, ye Usuku Lomhlaba besidinga ukwenza imithambo yemizuzu engama-30 ngokusebenzisa isicelo esinye ukufumana imbasa.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, Siza kuyifumana le mbasa ukuze sabelane ngayo ngeMessage, kunye nokubanakho kokudlulisela koogxa bethu ukuba sigqibe lo mngeni sele ukhankanyiwe. Uya kuba neeyure ezingama-24 ngeCawa kaMeyi 14 ukufumana umceli mngeni, kungenjalo uyakunyamalala kwaye awuyi kuba nakho ukuwufumana kwakhona, ihlazo lokwenene kuthi kwabo baphulukene nomceli mngeni ongaqhelekanga.
Ucinga ntoni ngolu hlobo lomngeni osetyenziswa ngu-Apple ukusikhuthaza ukuba senze ezemidlalo? Kubonakala kum lilinge elikhulu, ukongeza, Ngubani ongonwabanga kukufumana eso saziso kwiApple Watch ukuba siphumelele?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Sele sinomceli mngeni kunye nembasa kwi-Apple Watch yoSuku looMama
Kwaye nini isaziso sokuba impumelelo izokutsiba, ngeCawe enye? Kwangaphambili, umhla womhlaba uyakundazisa kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo.
Ugqatso lwenziwe !!! , kwaye iLogo ayiveli.
UJimmi iMac sitsho
Ewe kubonakala ngathi khange kubekho mini kamama
Phendula uJimmi iMac
I-Apple iyaqhubeka nokusebenza, iApple Music iyadibana nokuhamba komsebenzi
Inkqubo yokulungisa i-iPad Pro Smart Keyboard